June 10, 2021 - ApannPyay Media
June 10, 2021 by ApannPyay Media
မြန်မာပြည်ရဲ့ရွှေကြောနေရာဒေသများ မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အတော်များများမှာ ရွှေထွက်လို့ ရွှေမြန်မာလို့ ခေါ်မယ်ဆိုလည်းခေါ်လို့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှ ရွှေထွက်ရှိရာ ဒေသများ ကချင်ပြည်နယ် = ကာမိုင်း၊ ခေါင်လန်ဖူး၊ ချီဖွေ၊ ဆော့လော်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်၊ တနိုင်းဒေသ၊ နောင်မွန်၊ ပူတာအို၊ မချမ်းဘော၊ ဖားကန့် ၊ ဗန်းမော်၊ မိုးကောင်း၊ မံစီ၊ မိုးညှင်း၊ မိုးမောက်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ ရွှေကူ၊ ဟိုပင်၊ကရင်ပြည်နယ်= ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ သံတောင်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း= ကနီ၊ ကသာ၊ ကလေးဝ၊ကောလင်း၊ ကန့်ဘလူ၊ ကွန်းလှ၊ ခန္ဏီး၊ တမူး၊ တန့်ဆည်၊ ထီးချိုင့်၊ ပင်လယ်ဗူး၊ ဗန်းမောက်၊ မုံရွာ၊ မင်းကင်း၊ ယင်းမာပင်၊ ဝန်းသို၊ မော်လိုက်၊ ဟုမ္မလင်း၊ အင်းတော်၊ တနင်္သာရီတိုင်း = … Read more
ဟင်းချက်အမွှေးအကြိုင်ကုန်စိမ်းတွေကို တာရှည်ခံအောင်သိမ်းဆည်းနည်း ဒီနေ့ကတော့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားတတ်ကြတဲ့ဟင်းချက်အမွှေးအကြိုင်ကုန်စိမ်းတွေကို တာရှည်ခံအောင်သိမ်းဆည်းနည်းလေးဝေမျှပါရစေ….. ကျွန်မကတော့ အိမ်မှာဟင်းချက်ရင်အမွှေးအကြိုင်အဆာပလာတွေထည့်ချက်ရတာသဘောကျသူမို့ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ နံနံပင်၊ ရှမ်းနံနံ၊ ပျဥ်းတော်သိမ်ရွက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကုဆိုင်၊ ပင်စိမ်း အစရှိတဲ့အရွက်တွေကိုအမြဲဆောင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့အရွက်တွေကျတော့ ဝယ်လာပြီးချက်ချင်း (သို့) ၂/၃ ရက်လောက်အတွင်းသုံးမှလတ်ဆတ်ပြီး ကြာရင်ရိပြီးဝါလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လွန်းလို့ ခဏခဏမသုံးဖြစ်ဘဲပစ်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်။ ​အရွက်တွေကိုစိမ်းစိမ်းစိုစိုလေးနဲ့ဘယ်လိုလတ်ဆတ်အောင်ထားရမလဲနည်းလမ်းရှာရင်း အဆင်ပြေတဲ့နည်းတွေ့သွားလို့ပြန်လည်ဝေမျှတာပါ….. ဝယ်လာတဲ့ကုန်စိမ်းအရွက်တွေကိုရေဆေးပြီးသိမ်းရင်မတော်ရိကုန်မှာစိုးလို့ သိမ်းရင်ရေမဆေးတော့ဘဲ သိမ်းပြီးထုတ်ချက်ခါနီးမှဆားရေစိမ်ပြီးရေသန့်နဲ့ထပ်စိမ်ဆေးပါတယ်။ ဝယ်လာတဲ့ကုန်စိမ်းအရွက်တွေကို ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ထဲကထုတ်ပြီး ဇကာနဲ့ရေပြောင်အောင်စစ်ထားပါတယ်။ ရေလုံးဝခြောက်သွေ့သွားပြီဆိုရင် မကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမျိုးတူရာခွဲပြီး တစ်မျိုးစီကို ရေလုံတဲ့ဖန်ပုလင်းထဲထည့်၊ အဖုံးသေချာပိတ်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲက အသီးအရွက်ထည့်တဲ့အအေးခန်းထဲမှာပဲသိမ်းပါတယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတော့အညှာခြွေပြီးသိမ်းရင်ပိုအထားခံပါတယ်။ ပုံထဲမှာပြထားတာက နည်းနည်းပဲကျန်တဲ့လက်ကျန်မို့ဒီအတိုင်းသိမ်းလိုက်တာပါ။ အပေါ်မှာပြောထားသလိုနည်းနဲ့သိမ်းတယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်တော့ စိမ်းစိမ်းစိုစိုခြောက်ခြောက်သွေ့သွေးလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လေလုံတဲ့ဖန်ပုလင်းဆိုတာလည်းတကူးတကရှာဝယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သုံးပြီးသား အိုဗာတင်းပုလင်း၊ ဟောလစ်ပုလင်း၊ ကော်ဖီမှုန့်ပုလင်းလိုပုလင်းမျိုးတွေကိုပြန်သုံးဖို့ပြောတာပါ။ ပလတ်စတစ်လေလုံဗူးနဲ့သိမ်းဖူးပေမယ့်ရေငွေ့ပြန်ကျတတ်လို့ ဖန်ဗူးနဲ့သိမ်းတာလောက်အဆင်မပြေပါဘူး။ ဟင်းချက်ခါနီးမှ ငရုတ်သီးစိမ်း / နံနံပင် / … Read more
ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်လန်းစေဖို့ နဝင်းအစီအရင် မိမိမွေးနေ့ နံက်(9..45)နာရီတွင် ကွမ်းရွက် ကိုးရွက်မှာ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုရေးပါ ရေးပုံရေးနည်းမှာ ခဲတံချွန်ချွန် လေးတစ်ချောင်းကို ကွမ်းစားထုံးဖြင့် တို့၍ရေးရပါမည်။ ကွမ်းရွက်များပေါ်တွင်လဖက် အနည်းငယ်စီ(ကိုး)ပုံ ပုံ၍ လင်ဗန်းတစ်ချပ်တွင်းထည့်ပြီး အလည်တွင် လိမ္မော်ရည်ဘူးပေါ်သို့့ ဖယောင်းတိုင်အဝါရောင်လေး တစ်တိုင် တင်ပြီးမီးထွန်း၍နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ။ သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုဟ် များထံလှူ ဒါန်း၍မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။ နေ့စဉ်နံက်(9..45) နာရီတွင်မီးထွန်းပေးပါ။ ကွမ်းရွက်များချောက်သွားလျှင် ကိုး ရက်ပြည့်မှစွန့်ရပါမည်၊ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်လန်းစေ ကောင်းကံရစေ၊ ကံကောင်းစေ ဘဘဆရာဦးမျိုးမြင့်မြတ် သိသူဖေါ်စား မသိသူကျော်သွားကြပါလေ ေရာင္းပန္းဝယ္ပန္းပြင့္လန္းေစဖို႔ နဝင္းအစီအရင္ မိမိေမြးေန႔ နံက္(9..45)နာရီတြင္ ကြမ္းရြက္ ကိုးရြက္မွာ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကိုေရးပါ ေရးပုံေရးနည္းမွာ ခဲတံခၽြန္ခၽြန္ ေလးတစ္ေခ်ာင္းကို ကြမ္းစားထုံးျဖင့္ တို႔၍ေရးရပါမည္။ ကြမ္းရြက္မ်ားေပၚတြင္လဖက္ အနည္းငယ္စီ(ကိုး)ပုံ ပုံ၍ လင္ဗန္းတစ္ခ်ပ္တြင္းထည့္ၿပီး အလည္တြင္ လိေမၼာ္ရည္ဘူးေပၚသို႔့ ဖေယာင္းတိုင္အဝါေရာင္ေလး တစ္တိုင္ … Read more
ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ရမည့် အချက်လေးများ
ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ရမည့် အချက်လေးများ အိိမ်ထောင်ရေးတွင် ရှောင်ရှားနိိုင်ရန် ၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင်် တဘက်သားကိုအပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း နို်င်တဲ့ အပြင််မီးလျှံထဲကို ဓါတ်ဆီ လောင်းလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျရင် ဘယ်သူမှ အလျှော့ ပေးလို့ မရတဲ့ အနေအထား ရောက်သွားတတ်ပြီး ခက်ခဲသွားပါတယ်။ ဒါကြောင်မို့လို့ လင်မယား မှတ်ထားရ မှာက မည်သူရဲ့ရှေ့မှာမဆို အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်မိတာမျိုး လုံးဝရှောင်ကြင်ပါ။ လက်ဝါးတဘက် ထဲ ဘယ်တော့မှ လက်ခုတ်တီးလို့ မရပါဘူး။ ၂။ သားသမီး ရှေ့မှာ … Read more
အသားအရေ နှင့် အလှအပအတွက် စံပါယ်ပန််း၏ လျှို့ဝှက်ချက်
အသားအရေ နှင့် အလှအပအတွက် စံပါယ်ပန််း၏ လျှို့ဝှက်ချက် စံံပယ်ပန်းလို့ ပြောလိုက်ရင် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ပန်းလှလှလေးကို ပြေးမြင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ ပန်းလှလှလေးက ရနံလေးတင် မွှေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး ရှိိသလို အသားအရေ အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ စံပယ်ပန်း လှလှလေးတွေက အသားအရေကို ဘယ်လိုများ အထောက်အပံ့ ပေးသလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းလေးကနေ ပြောပြပေးမယ်နော်။ စံပယ်ပန််းမွှေးမွှေးလေး ကပေးတဲ့ အသားအရေ ကျန်းမာရေး အရောင််ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ အနံ့မွှေးမွှေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆင်းရော အချင်းပါ ပြည့်စုံတဲ့ စံပယ်ပန်းလေးက အသားအရေအတွက် အခုလို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေကိို သက်သာစေနိုင်တယ် စံံပယ်ပန်းက အရောင်ကျစေနိုင်တဲ့ အာနိသင် ရှိတာ​ကြောင့် ဝက်ခြံကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ စံပယ်ရွက်ကို ကြိတ်ခြေပြီး ရလာတဲ့ အနှစ်ထဲကို … Read more
ကားဝယ်သူတိုင်းသွားပြီးဦးတိုက်နေ တဲ့ ရွှေညောင်ပင်ဘိုးဘိုးကြီး နောက်ကွယ်က သမိုင်းအမှန်
ကားဝယ်သူတိုင်းသွားပြီးဦးတိုက်နေ တဲ့ ရွှေညောင်ပင်ဘိုးဘိုးကြီး နောက်ကွယ်က သမိုင်းအမှန် ၁ ၉၃၅ လောက်က ရန်ကုန် ပဲခူး လမ်းမပေါ် ထောက်ကြန့်နားမှာ ညောင်ပင်ကြီး တစ်ပင်ရှိသတဲ့။ အဲ့ဒီညောင်ပင်ဘေးမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်ပြန် အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကားဝပ်ရှော့တဲကလေးရှိတယ်။ အဘိုးကြီးသေသွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးနားမှာ ကားတွေ မကြာမကြာပျက်တတ်တယ်။ ညောင်ပင်ကြီးကို ပါလာတဲ့ထမင်း၊ဟင်း၊ မုန့်လေးတွေ ပသပြီး တောင်းပန်လိုက်ရင် ကားတွေက ပြန်ကောင်းသွားရောတဲ့လေ။ ဝပ်ရှော့ဆရာကြီးက နတ်ဖြစ်ပြီး ဂွင်ဖန်တာနေမယ်လို့ ကားသမားတွေက ယူဆကြတယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အေးရင် ဆိုတဲ့ ဘွားတော်က အဲ့ဒီညောင်ပင်မှာ ရွှေညောင်ပင်ဘိုးဘိုးကြီး ဆိုပြီး နတ်ကွန်းဆောက်လိုက်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကားတွေ ဝယ်ပြီးရင် ဝပ်ရှော့ဆရာဘိုးဘိုးကြီး ကို လာလာပြကြတော့တာတဲ့လေ။ အခု ရွှေညောင်ပင်နတ်နန်းသွားပြီး သမိုင်းကြောင်းမေးရင်တော့ .. ကဿပဘုရားရှင်ကနေ အစချီပြီး … Read more
တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ဘာလို့ အညံ့ပျောက်အောင်ခေါင်းလျှော်ကြသလဲ?ပန်ထွာဘုရင်မနဲ့ ‌‌ ရောဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲ?
တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ဘာလို့ အညံ့ပျောက်အောင်ခေါင်းလျှော်ကြသလဲ?ပန်ထွာဘုရင်မနဲ့ ‌‌ ရောဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲ? တရော်ကင်ပွန်းရာဇဝင် မြန်မာမှန်ရင်သိထားဖို့ပါ။မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တရော်ကင်ပွန်းကို အသုံးပြုလို့ ခေါင်းလျှော်ရင် အညံ့တွေ ပျောက်ပြီး ကျက်သရေမင်္ဂလာတွေနဲ့ ထုံမွမ်းစေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ ဘာတွေ မက်ရင်လည်း တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ လျှော်ရင် နိမိတ်ဆိုးတွေ ကြေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရော်ကင်ပွန်း ကို ဘယ်လိုစတင်တွေ့ရှိ အသုံးပြုခဲ့ကြတာလည်းဆိုတော့..သရေခေတ္တရာပြည်တွင် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး စိုးစံစဉ်က ဖြစ်သည်။ ထိုမင်းကြီးကား နဖူးအလယ်တွင် မှဲ့ရှင်တော် တစ်ခုပါ၍ ” မျက်စိသုံးခု အတုမဲ့ပေါင် ဒွတ္တဘောင် ” ဟု နှောင်းလူများက မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မင်းကြီးသည် သိကြားမင်းဆက်သော လက်နက်ငါးပါး၊ နာဠာဂီရိဆင်၊ ၀လာဟက နတ်မြင်းတို့ကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်သည်ဆို၏။ တစ်ခါသော် သရေခေတ္တရာပြည်အနီးရှိ ဗိဿ နိုးကိုသွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာ ဗိဿ … Read more
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ ပါသွားတဲ့ အလှူရှင်မိသားစုရဲ့ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ
လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှာ ပါသွားတဲ့ အလှူရှင်မိသားစုရဲ့ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ ရှယ်မရလို့ ကော်ပီ ယူလာပေးတာ ယနေ့ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ လေယဉ်ပျက်ကျတဲ့ အထဲမှာပါသွားတဲ့ မိသားစုလေးပါ။ အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အခု အသစ်ဆောက်မည့် မဟာဝိသုတာရာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီး၏ မြေအလှူရှင် မိသားစုလေး ၏ နောက်ဆုံး ပုံရိပ် လေးတွေဖြစ်ပါတယ် … ကောင်းရာ ဘုံဘဝ မြင့်မြတ်သော ဘုံဘဝ တွင်ဆရာတော်ဘုရားများ နှင့် အတူ နတ်ဘုံနတ်နန်း မှာစံမြန်း နိုင်ကြပါစေ….. ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမွာ ပါသြားတဲ့ အလွဴရွင္မိသားစုရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပံုရိပ္မ်ား ရွယ္မရလို႔ ေကာ္ပီ ယူလာေပးတာ ယေန႔ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရက္ေန႔ ေလယဥ္ပ်က္က်တဲ့ အထဲမွာပါသြားတဲ့ မိသားစုေလးပါ။ အရမ္းကိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္အခု အသစ္ေဆာက္မည့္ မဟာဝိသုတာရာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႀကီး၏ ေျမအလႉရွင္ မိသားစုေလး ၏ ေနာက္ဆုံး … Read more
ဆွမ်းဘုန်းပေးခါနီး အုန်းမောင်းခေါက်တာ ဘာကြောင့်လဲ
ဆွမ်းဘုန်းပေးခါနီး အုန်းမောင်းခေါက်တာ ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်တော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းသား ပါဒါပေမယ့် အုန်းခေါင်းခေါက်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ခုမှသိခြင်းဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်ကျွန်တော့်လိုမသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်၍ Copy ယူလာခြင်းဖြစ်သည်။ သိချင်လို့ လိုက်ရှာနေတာ ကြာပြီဗျာ ခုမှ သိရတော့ တယ် ။ ဂျပန်ခေတ်က ဖြစ်သည် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး မင်္ဂလာစေတီ ချောင်သို့ ဂျပန်အရာရှိ တစ်ဦးနှင့် စကားပြန် တစ်ဦး ရောက်လာ၏ ဆွမ်းစားချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ကြေးမောင်းထိုး တုံးခေါက်ရာ ဂျပန်အရာရှိက ဘာလုပ်တာလဲ ဟုမေး၏။ စကားပြန်က ဆွမ်းစားမှာမို့ ကြေးမောင်းထိုး တုံးခေါက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြရာ ဂျပန်အရာရှိကြီးက ” ဒီဘုန်းကြီးတွေ သူများလှူတဲ့ ဆွမ်းစားတာတောင် ဒီလို ကြေးမောင်းတွေ တုံးတွေ ခေါက်ပြီးစားရင် ကိုယ့်ဖာသာ ရှာစားရင်တော့ အမြောက်ဖောက်ပြီးများ … Read more
ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ မြန်မာပြန် မြန်မာလိုပဲ တင်ပါမယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တွေ့ အံ့သြလောက်အောင် အစွမ်းထက်လို့ ယုံကြည်စွာ ရှိခိုးကြ ပါရန်တိုက်တွန် းပါရစေ ၁.သောဘဂဝါ- ထို့မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဣတိပိ-ဤသို့သော အကြောင်းကြောင့်လည်း အရဟံ-အရဟ မည်တော်မူ ပါပေ၏။ သောဘဂဝါ-ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည် အရဟံဝတ-လူ နတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါ တို့၏ ပူဇော် အထူးကိုခံတော် မူထိုက်ပါ ပေစွတကား။ အရဟန္တံ-ပူဇော် အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာ ဘုရားကို သိရသာ-ဦးခေါင်းရတနာမြတ်အင်္ဂါဖြင့် အဟံ-တပည့်တော်သည် ဝန္ဒာမိ-ရိုသေမြတ် နိုးလက်အုပ် မိုး၍ ရှိခို းပါ၏။ အရဟန္တံ-ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာ ဘုရားကို သရဏံ-ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍ ဂစ္ဆာမိ- ဆည်းကပ် ပါ၏။ ဣတိပိ-ဤသို့သော အကြောင်းကြောင့်လည်း အရဟံ-ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော။ … Read more
မိုးသဲထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ရဖို့တန်းစီရင်း လှူလိုက်တဲ့ထမင်းဗူးကို ထိုင်စားနေတာကိုကြည့်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ယနေ့မနက်ပိုင်းက အင်းစိန်ထောင် ဆူပူမှုဖြစ်ပွား
အိမ်မှာ အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးမိဘတွေရှိရင် ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပေးပါ
ကိုရီးယားက ဆရာဝန် ရှင်းပြပေးတဲ့ အောက်စီဂျင် သန့်သန့် အရေးပေါ်ရှုနည်းပါ
အောက်စီဂျင်အတွက် အခက်အခဲတွေများစွာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့သိန်း (၅၀၀)လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်
လက်မောင်းကပ်ရောဂါ နဲ့ ကုသနည်းများ
အပေါင်ဆိုင်က ပြန်မရွေးနိုင်တော့သည့် စက်ဘီးနှင့် ဆိုက်ကားများကို အခမဲ့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာသူဌေး
ရေဖျဉ်းရောဂါအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်းများ( ရေဖျဉ်း ပေခင်း )